South Africa Deports Nearly 43 000 Zimbabweans - allAfrica.com
South Africa Deports Nearly 43 000 Zimbabweans
Since October 2011, about 43 000 Zimbabweans have been deported from South Africa after the expiry of a deadline for immigrants without correct documentation.
NEARLY 43 000 Zimbabweans have been deported from South Africa since October last year for living in that country without proper documentation. Read more »
File photo: Zimbabwe economic migrants crawl under the border fence into South Africa from Zimbabwe.
SW Radio, 23 November 2012
The South African government could soon face being charged with contempt of court, as part of an ongoing battle by human rights groups to stop the closure of refugee reception… Read more »
South Africa: Zimbabwean Lays Complaint With Police Against Home Affairs Official
GroundUp, 24 October 2012
A 25 years old asylum seeker lodged a complaint of bribery with the police against a Cape Town Foreshore Home Affairs official last week. Read more »
Migrants in South Africa Claim Rights Abuses
About eighty asylum seekers in the Western Cape have launched a complaint with the South African Rights Commission against the government over allegations of human rights abuses. Read more »
The Road to Asylum Documentation in South Africa
Refugee rights organisations are outraged that the Department of Home Affairs continues to turn away scores of new refugee applicants in Cape Town despite a High Court ruling to ... Read more »